Okraina: Misetra Fanoherana Ireo Solombavam-bahoaka Manosika Ny Hanaovana Dika Mitovy Amin’ny Lalàna Mifehy Ny Rosiana Mpamaham-bolongana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2015 2:30 GMT
Dia tena tratry ny zava-tsy nampoizina nahasorena tokoa ireo Okrainiana mpampiasa aterineto tamin'ny faran'iny herinandro lasa iny rehefa injay nisy mpikambana iray tao amin'ny antenimiera nanoso-kevitra ny amin'ny tokony hitakiana amin'ireo bilaogera ny hanomezany fanamarinana ny vaovao alefany sy hanolorany ny mombamomba azy ireo amin'ny manampahefana.
Ny 12 Febroary, natolotr'i Vasyl Petyovka, solombavambahoaka iray avy any Okraina Andrefana izay tafiditra ao amin'ny parlemanta rehefa nahazo ny vaton'ny maro an'isa, ny volavolam-panitsiana ny lalàna momba ny fampahalalana vaovao. Volavolan-dalàna mikasika ny hifehezana ny asan'ireo bilaogera ety anaty serasera sy hametraka andianà fepetra amin'ireo mpampiasa aterineto.
Петьовка вирішив “врегулювати блогерів”, бо “пишете тут всяке в своїх інтернетах”! Коротко: http://t.co/CxcLBollBa pic.twitter.com/Loinod76cx
Nanapaka hevitra i Petyovka “ny hifehy ny bilaogera,” satria “soratanareo rehetra ao anaty aterineto daholo izao karazana zavatra rehetra izao”! Vaovao tsy misy mpanana ity.
Taitra avy hatrany tamin'ilay fanitsiana sy ny soso-kevitra nomeny ireo mpanao gazety sy mpampiasa ny media sosialy. Ankoatry ny zavatra hafa, dia faritan'ilay volavolan-dalàna ho toy ny “tomponà tranonkala iray ao amin'ny aterineto izay mamoaka vaovao ho an'ny daholobe” ny “bilaogera” iray. Raha tsorina dia ny rehetra mampiasa ny aterineto no mety ho tratr'izay famaritana izay.
Ny drafitra fanitsiana natolotr'i Petyovka dia manindry fa be loatra ny vaovao tsy voamarina ety anaty aterineto, noho izany dia tokony horaisina ho tomponandraikitra amin'ny fanamarinana ny zava-misy sy vaovao alefany ireo bilaogera, toy ireo mpampahalala vaovao mahazatra ihany.
Soso-kevitra ao amin'ilay volavolam-panitsiana ihany koa ny hanivànana ireo faniratsiràna zava-masina eny anaty bilaogy Okrainiana, sy ny handraràna ireo bilaogera tsy “hampiasa ny tranonkalany hanafanana vaovao manana ny lanjany ho an'ny daholobe,” na dia tsy nanome fanazavana aza ity parlemantera ity mikasika ny antsoiny amin'izay vaovao izay na ny fomba fampiasàna bilaogy na tranonkala “hanafenana” vaovao..
Farany, takian'ilay volavolam-panitsiana ireo bilaogera mba hamoaka eo amin'ny pejiny ny anarany feno sy ny adiresy elektronika ampiasainy, mba hanamoràna ny fahafahan'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta sy ireo mpampihatra lalàna mifandray aminy.
Tsy mahagaga raha marobe ny Okrainiana mpampiasa aterineto no nahita fitoviana teo amin'ireo soso-kevitra natolotr'i Petyovka sy ilay lalàna iray ho an'ny bilaogera izay efa manan-kery any Rosia.
Ny solombavambahoaka no Okrainiana, fa ny lalàna kosa Rosiana.
Nandritry ny faran'ny herinandro manontolo, difotry ny fifanakalozan-dresaka sy fanamelohana ilay volavolan-dalàna ho an'ny bilaogera tamin'ny fitenenan'ireo mpampiasa ny zavatra tany an-tsainy tany teny anatin'ireo fanehoanevitra momba ilay tantara ny tontolon'ny fitorahana bolongana tao Okraina, ny tao amin'ny Twitter ary tao amin'ny Facebook.
Raha ny fahitàna azy, ny teny mafy nataon'ireo mpampiasa aterineto ho an'ilay solombavambahoaka sy ny haavon'ny fahalinana nasehon'ireo mpampahalala vaovao dia samy namely mafy an'i Vasyl Petyovka. Ny 16 Febroary, nanambara izy fa hosintoniny ilay volavolam-panitsiana. Nilaza ilay solombavambahoaka fa tsy tao an-tsainy mihitsy ny haneritery ny asan'ireo bilaogera, na ny zon'izy ireo, ary nambarany fa te-hiaro fotsiny ny tontolon'ny tranonkala Okrainiana tsy ho sehatry ny fihantsiana sy ny fanelezana vaovao tsy marina avy amin'ireo “bilaogera sandoka sy ny bots avy any Kremlin” izy, izay nokendrena hiantefan'ilay volavolan-dalàna.
Tsy vitako ny tsy hiraharaha ny hevitry ny olona. Raha hitan'ireo mpanao lalàna, manampahaizana manokana, mpanao gazety fa loza mitatao ho an'ny fahalalahana miteny ilay volavolam-panitsiana, dia tsy tokony handalo any amin'ny antenimiera izany ka ho lasa lalàna. Izay no antony hisintonako azy any amin'ny Verkhovna Rada.
Nijanona ho feno ahiahy momba izay tena ao an-dohan'i Petyovka ihany ireo mpampiasa media sosialy, saingy nidera ny vondrom-piarahamonina ety anaty aterineto tamin'ny fihetsehan'izy ireo avy hatrany no sady niaiky ny tabataba nataon'ny media sosialy mba hisintonana ilay volavolam-panitsiana.
Nosintonin'i Petyovka ilay volavolam-panitsiana, voanteny nadika tsirairay avy amin'ilay lalàna Rosista [Rosiana] momba ny bilaogera.
Ry namana, mahery isika rehefa tafaraka. Isaorana ny tsirairay tamin'ny fandraisany anjara.
Nandalo fotoana sarotra ny governemanta Okrainiana handrafetana politika momba ny fampitàna vaovao raha sady niatrika ny fifandonana ara-miaramila tamin'ny Rosiana sy ireo mpomba azy tany Atsinanana, ary ny ady amin'ny alàlan'ny fandefasana vaovao nifanaovany tamin'i Rosia. Tamin'ny faran'ny taona lasa iny, nampametraka fanontaniana ho an'ny daholobe ny namoronana Ministera iray hisahana ny politikan'ny fampahalalana vaovao, izay nosorana ny anarana hoe “Ministeran'ny Fahamarinana.” Ho toy ny ady ataon'i Okraina amin'ny olan'ny sivana, fampiezankevitra, ary fiarovana ny loharanom-baovao, dia anjaran'ireo mavitrika mpampiasa aterineto sy mpisolovava ny fahalalahana miteny no mihetsika ho toy ny arofanina sy mari-pandrefesana ny fahalalahana maneho hevitra, ary mandefa famantarana ho an'ny fanjakàna rehefa manararaotra ny tombontsoa nomena azy ito farany.